Gadzira makona anoshanda muOS X kune zvaunofarira | Ndinobva mac
Gadzira makona anopisa muOS X kune zvaunofarira
Nhasi tiri kuzotaura nezve chimwe chikamu cheOS X icho chingangokubatsira kunatsiridza kugadzirwa kwako nehurongwa uye ndeyekuti sarudzo iyi inochengetedza nguva yekuwana dzimwe nzvimbo dzayo.
Iyi yekugadzika hapana imwe kunze kwe "Anoshanda Makona", chiitiko chinoshandura makona eiyo skrini nenzira pfupi izvo zvinogona kumisikidzwa kushandisa mapfupi ekhibhodi kuita chengetedzo huru nekuti dzimwe nguva zvinokwanisika kuti isu tivashandise ivo vasingazivi.
Kuti uwane kugadziriswa kwemakona anoshanda eiyo skrini, tinogona kuzviita kuburikidza Sarudzo dzeSystem> Desktop & Screensaver> Hot Makona. Iyo yekumisikidza yakanakisa ndeyekuisa, semuenzaniso, sarudzo dziri nyore ne "Start the screensaver" zvekuti kunyangwe dzichigadziriswa netsaona hadzigumbure, nepo vamwe vamwe zvirinani kuvamutsa nema keyboard mapfupi.
Kuti tikwanise kuzvimisikidza seizvi isu tinofanirwa chete bata pasi Shift, Alt, kana Cmd makiyi apo isu tichisarudza sarudzo yatiri kuda kuwedzera kukona. Nenzira iyi isu tinonyanya kudzivirira kushanda kwayo kana tisingamanikidze mubatanidzwa, iyo chete asi ndeyekuti isu hatizokwanise kugadzirisa imwe neimwe kona neimwe musanganiswa asi iyo yatino sarudza munguva pfupi ndiyo ichave muyero vamwe vese.
Kunyangwe zvakadaro, kana iwe ukaona iyi inonakidza sarudzo uye iwe uchifunga kuti nenzira dzako dzekushanda nehurongwa iwe unogona kutora mukana nazvo, kune zvekare kune vechitatu-bato sarudzo senge Quicksilver , que ivo vanokupa iwe zvimwe zvekunonoka sarudzo uye pakupedzisira ivo vanozovandudza dzimwe sarudzo dzakanaka idzo Apple inotipa.
Mamwe mashoko - Quicksilver inobuda mubeta uye inotangisa mumaoko edu mune yayo yekupedzisira vhezheni
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Gadzira makona anopisa muOS X kune zvaunofarira
Iyo PhotoZoom Classic 5 yekushandisa ine inonakidza dhisikaundi
Readkit inogadziridzwa kune vhezheni 2.2 nerutsigiro rwemavhisi akawanda